पानीपुरीको बेफाइदा मात्र होइन यस्ता फाइदा पनि छन् ! « News24 : Premium News Channel
पानीपुरी युवतीहरुले धेरै रुचाउने गरेको खानेकुरा हो । भारत लगायत विश्‍वभरी नै पानीपुरी निक्‍कै चर्चित मानिन्छ। विशेष गरी नेपाल र भारतमा पानीपुरीको माग बढ्दो छ। सर्व प्रथम पानी पुरी भारतको मगध क्षेत्रबाट सुरुवात भएको हो।
त्यहाँको दक्षिणी भूभाग बिहारको नामबाट चिन्‍ने गरिन्छ भने यसलाई फुल्की समेत भनेर भन्‍ने गरिन्छ। पानीपुरीलाई सही ढंगबाट बनाएर खाएमा यसले शरीरलाई एसीडिटीबाट राहत दिलाउँछ भने मुडलाई फ्रेस बनाउँछ।
युवतीहरु साथीसँग रमाउन र मित्रतालाई सधै गाढा बनाइ राख्‍न पनि यसले ठूलो भुमिका खेलेका हुन्छन्। चार वटा पानीपुरीमा करीब सय क्यालोरी हुने गर्छ।
चटपटे र पानीपुरी खानेहरु होसियार !
तपाईले सडक पेटीमा ठेलागाडामा राखिएका चटपटे र पानीपुरी खाने गर्नुभएको छ ? छ भने सावधान रहनुहोला। किनकी त्यसमा स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने खालका हानिकारक तेलको प्रयोग गरेको पाइएको छ।
विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलको नेतृत्वमा मंगलबार गएको बजार अनुगमन टोलीले चाबहिलस्थित धोविखोलानजिक एक कवाडी पसलबाट दूषित र हानिकारक तेल बिक्री गरेको फेला पारेको हो।
‘कवाडी पसलमा स्वास्थ्यलाई प्रतिकल असर पार्ने पुरानो गन्हाउने तेल बिक्री गरेको भेटियो’ शाखा अधिकृत पोखरेलले भने ‘लेबल नभएको म्याद नाघेका ८० लिटर तेल जफत गरी प्रहरीलाई बुझाएका छौं।’